Talyaaniga oo ka dilaacay tuugada Corona oo dadka ku dhaca iyagoo sheeganaya shaqaale… – Hagaag.com
Posted on 25 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dowlada hoose ee Degmada Zepedo San Giacomo ee ku taal magaalada Milano ee waqooyiga Talyaaniga, ayaa ogeysiis ku daabacday Facebook oo laga digayo shaqaalaha caafimaadka ee been abuurka ah, sida uu qoray wargayska Corriere della Sera.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in laamaha amniga ee magaalada ay ka digayaan in kuwa dadka khiyaana ay isu ekeysiiyeen qaarkood oo ay iska dhigaan inay yihiin shaqaale caafimaad oo sameeya baaritaano bilaash ah oo loogu talagalay viruska Corona, iyadoo ujeedku yahay in la gaaro guryaha gaarka loo leeyahay iyo dadka oo wax laga xada.
Dhakhaatiirta iyo Kalkaalayaasha been abuurka ah ayaa dadka telefoonka ugu sheega inay doonayaan inay guriga yimaadaan si ay u baaraan virus-ka Corona ee cusub “Covid19”.
Booliska maxalliga ah ayaa ugu baaqay shacabka inay diidaan casuumadan oo aysan u ogolaan inay galaan guryahooda.
Booliisku waxay sheegeen in shaqaalaha caafimaadku ay booqashooyinka guriyaha ku sameeyaan oo keliya haddii ay muwaadiniintu horay u codsadaan.
Waxaa jiray isku dayo dadkan “mutadawiciin been abuurka ah” oo sheeganaya inay ka tirsan yihiin Laanqayrta Cas, oo la xiriiray guryaha dadka waayeelka ee nugul si loo xado.
Wargeysku wuxuu sheegay in qof lixaad ah uu ku dhintey dalka Talyaaniga ka dib markii uu haleelay virus-ka Corona, isla markaana tirada kiisaska cudurkaasi ay ka badan tahay laba boqol oo qof waqooyiga dalka tan iyo Jimcihii.
Tartamadii Ciyaaraha kubbadda cagta ee Seria A ee Talyaaniga ayaa dib loo dhigay, waxaana la joojiyay xafladii ama mahrajaankii caanka ahaa ee Venice Festival, sidoo kale waxaa la joojiyey bandhigyada moodada ee isbuuca Fashion-ka ee Milan.
In ka badan 50,000 oo qof oo ku nool qiyaastii toban magaalo oo ku yaal woqooyiga talyaaniga ayaa la faray inay ku ekaadaan guryahooda, halka booliiskuna ay dhigteen isbaarooyin si ay u meel mariyaan xayiraada.